Antoko HVM “ Tsy didy jadona ny hahamehana ara-pahasalamana.”
Raiamandreny miaro an’i Toamasina Mitaky ny fialan’ny Filoha ao anatin’ny 72 ora…
Nanao fanambarana ireo andian’olona mitonona ho Fikambanana Vondron’ny Raiamandreny miaro an’i Toamasina omaly, izay maneho fa ahitana ny foko rehetra tsy an-kanavaka.
Mpitandrina Hubert Rakotoarivony “Lesoka be ny serasera, tsy hita ny tombotsoa iraisana…”
Miteraka adihevitra ilay resaka Rova ka ao ny mankatoa ary ao no tsy resy lahatra.
K3F Manahy hetsi-bahoaka ho sarotra fehezina
Nanao fanambarana ny Komitin` ny Fahamarinana sy ny Fandriampahalemana ary Fiadanana (K3F) manoloana ny fiainam-pirenena.
Zasy Angelo “Miato aloha ny tetikasa Tanà-masoandro”
Mitohy ny fanatanterahana ireo tetikasa samihafa nampantenain` ny Filoha Rajoelina na dia ao anatin` izao fahamehana ara-pahasalamana izao. Isan` izany ny fanamboarana ny “building’
Randriamamiarizafy Ignace Tsy azo hanaovana n'inona n'inona ny vakoka
Efa tamin'ny taona 1996 nahatonga antsika Malagasy ho zanatany Frantsay no notsoahin'ity mpanjanaka ity ny fahefana ara-politika sy ara-tsosialy nananan'ny mpanjaka teto Imerina, hoy Randriamamiarizafy Ignace dokotera jeografy,
Nampitandrina ny antoko DHD “Lozabe io tsindrona io !”
Nampahatsiahy ny antoko politika DHD, tarihin’ny filohany, Harinaivo Rasamoelina, fa efa nilaza izy ireo fa tokony ho fitondram-panjakana hifanaraka amin’ny lazainy izao fitondrana izao.
Ny hahamehana ara-pahasalamana dia tsy midika didy jadona, tsy fisian’ny mangarahara, fifanenjehana na fampihelezan-kevitra ara-politika, hoy ny avy eo anivon’ny antoko politika Hery vaovao ho an’I Madagasikara.
Aiza ny mangarahara amin’ny fampiasana ireo vola nindramina sy ny fanampiana ara-bola tsy averina ary ireo fanomezana hafa? Misy fitanilana tokoa ve ataon’ny fitondram-panjakana foibe amin’ny fampiharana ireo paikady hitsinjovana ny marefo, hoy hatrany ny HVM? Lasa fisehosehoana politika sy fanenjehana ireo tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra ary fanilihana ny herivelona hafa eto amin’ny firenena no mibahan-toerana amin’ny seraseran’ny fitondrana. Voatohintohina ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety sy maneho hevitra, hoy hatrany ny HVM, izay nanamafy fa fiaraha-mientana no ilaina ao anatin’izao ady izao.